मुख्य Archives ~ Page2of 314 ~ Banking Khabar
यो साता केके भयो बैंकिङ क्षेत्रमा ? टप सात खबरहरु
बैंकिङ खबर । यो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक मीतिको अर्थवार्षिक समीक्षा गर्यो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्यो । यता, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले गत …
२७ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थपिए
बैंकिङ खबर । मुलुकमा यस वर्ष २७ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थपिएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले गत डिसेम्बरमा सञ्चालित चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । विहीबार प्रकाशित नतिजाअनुसार यो वर्ष २७ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण भएका छन् …
धौलागिरी कालिका हाईड्रो लिमिटेडले म्याग्दी जिल्लाको दर्वाङ्ग, निसकोट, वावियाचौरमा अवस्थित म्याग्दी खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको “दर्वाङ्ग म्याग्दी जलविद्युत परियोजना” निर्माण गर्ने भएको छ । परियोजनामा लगानी गर्न प्रवद्र्घक कम्पनी र बैंकहरुबीच सानिमा बैंकको अगुवाईमा कर्जा लगानी सम्झौता भएको छ …
देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (छ महिनाको तथ्यांक)
आर्थिक परिदृश्य १. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो छ महिनासम्ममा उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रगति देखाएका छन् । गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरुमा अपेक्षाकृत विस्तार भइरहेको छ भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षा गरे भन्दा केही कम रहने देखिन्छ …
नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरुको वर्गीकरण, ‘क’ समूहमा ११० कम्पनी
बैंकिङ खबर । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र सूचिकरण विनियमावली, २०५३ को विनियम १४ को उपविनियम(२) ले व्यवस्था गरेको शर्त अनुसार सूचिकृत कम्पनीहरुको वर्गिकरण गरेको छ । जसअनुसार, सूचिकृत २०६ वटा कम्पनीहरुमध्ये ११० कम्पनी नेप्सेको सूचिकरणमा ‘क’ समूहमा परेका छन् । …
शाखा सञ्जालमा निजी क्षेत्रकै अब्बल बन्यो ‘एनआईसी एशिया बैंक’
रुपा कोइराला/विजय पराजुली । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षमा ५५ वटा शाखा विस्तार गरेको छ । शाखा विस्तारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बैंकले मुलुकभर १७३ वटा शाखा विस्तार गरिसकेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको शाखा सञ्जाल निजी …
पुँजीगत खर्च बढेन, लक्ष्यको १९.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । देशको राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्न परेको र मुलुकका विभिन्न भागमा गएको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विकास खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य रु …
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा बैंकहरुलाई कडाई गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जामा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ …
धेरै कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने
बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सरकारले कडाई गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ठगी बढेको तथा दर्ता मात्रै गराएर कारोबार नगरेको पाइएपछि सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न थालेको छ । विगत केही समयमा नै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै नियम …
छुट्ला ‘बैंकिङ ट्रेनिङ’, अझै बाँकी छ समय
बैंकिङ खबर । फागुन ६ गतेदेखि बैंकिङ तालिम हुने भएको छ । पाँच दिनसम्म संचालन हुने तालिममा बैंकमा जागीर पाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रारम्भिक ज्ञान दिइनेछ । बैंकिङ प्रणालीबाट कसरी कर्जा प्रवाह गरिन्छ र बैंकले व्यापार तथा लगानी कसरी …